६ महानगरमा मिल्यो भागबन्डा
रिपोर्ट नेपाल | 2022 Apr 20 | 08:53 am	357
काठमाडौं, बैशाख ७: सत्ता गठबन्धन दलले लामो रस्साकस्सीबीच ६ महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदको उम्मेदवारीमा भागबन्डा गरेका छन्। कांग्रेसको भागमा काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरको नगर प्रमुख पद परेको छ। एकीकृत समाजवादीले पोखरा, जसपाले वीरगन्ज र माओवादी केन्द्रले भरतपुरको नगर प्रमुख पाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार कांग्रेसले वीरगन्ज, पोखरा र भरतपुरमा उपप्रमुख लिने भएको छ। माओवादीले ललितपुर, एकीकृत समाजवादीले काठमाडौं र जसपाले विराटनगरमा उपप्रमुख पाउने भएका छन्। भरतपुर र पोखरा महानगरको भागबन्डामा गठबन्धनबीच रस्साकस्सी चलेको थियो। कांग्रेसका स्थानीय नेता÷कार्यकर्ताले दुवै महानगरपालिकाको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले नै लिनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए।
कार्यकर्ताले विरोध जनाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘बाध्यतावश’ पोखरा, भरतपुर र वीरगन्ज अन्य दललाई दिनुपरेको बताएका थिए। महानगर सिट बाँडफाँटमा समस्या देखिएपछि देउवाले प्रदेश र जिल्ला नेतालाई काठमाडौं बोलाएका थिए। देउवाले मंगलबार चितवन जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल र गण्डकी कांग्रेस सभापति शुक्रराज शर्मा, कास्की सभापति किशोरदत्त बराललाई बोलाएका हुन्। पोखरा अरू दललाई नदिन सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्दा ‘केही जवाफ नपाएको’ कास्की सभापति बरालले बताए।
‘गत चुनावमा पोखरामा कांग्रेसलाई करिब ४६ हजार मत आएको थियो। अहिले ६५–७० हजार मत खस्नेमा हामी विश्वस्त छौं। यो अवस्था बुझिदिनुपर्‍यो। गठबन्धनका नाममा जनाधार नै नभएका दललाई कसरी काँध बोकेर हिँड्नु भनेर प्रश्न गर्‍यौं’, बरालले भने, ‘तर, सभापतिजीले केही प्रतिक्रिया दिनुभएन।’ चितवनका जिल्ला सभापति खनालले भने, ‘सभापतिजीले तपाईंहरूले निर्णय बदल्नुपर्यो। गठबन्धनमा छौं। भागबन्डा नगरी गठबन्धन सँगै अघि बढ्न सकिँदैन भनेर भन्नुभयो।’
आफूले कार्यकर्ताको भावनाविपरीत जान सकिँदैन भन्ने जवाफ दिएको खनालले बताए। ‘कार्यकर्ता अब पनि माओवादीलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुराले यसै पनि आक्रोशित छन्। उहाँहरूले चितवन कांग्रेसको आत्मविश्वासलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ’, खनालले भने। गठबन्धनभित्र गत निर्वाचनमा जहाँ–जसले जितेको छ, उक्त स्थानीय तहको प्रमुखमा त्यही पार्टीको उम्मेदवार बनाउने मापदण्डअनुसार कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर पाएको हो। त्योसँगै कांग्रेसले काठमाडौं पनि आफ्नो भागमा राखेको छ। माओवादी केन्द्रले जितेको भरतपुर महानगरपालिका माओवादीले नै पाएको हो। जसपाले जितेको वीरगन्ज पनि उसकै पोल्टामा परेको छ। गत निर्वाचनमा एमालेले जितेको आधारमै गठबन्धन दलले एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई पोखरामा दिएको छ। कास्की समाजवादीलाई दिएपछि कास्की कांग्रेस सचिव भानु ढकालले गठबन्धनको निर्णय आएपश्चात् विरोध गर्दै भने, ‘समाजवादीले रूख चिह्न लिएर चुनाव लड्ने हो भने हामी सहमति जनाउन सक्छौं। नत्र भने हामी बहिस्कार गर्छौं। नेकपा एसको जनाधार कहाँ छ ? बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ। कांग्रेसको ६० हजार मत अर्को पार्टीको नेतालाई हाल्नका लागि हामीले संगठन बलियो बनाउन दुःख गरेका हौं ? यो कुरा माधव नेपाले पनि बुझिदिनुपर्छ।’
गठबन्धन दलहरूले उपमहानगरको हकमा पनि दुई विधिबाट बाँडफाँटको प्रक्रिया अघि सारेका थिए। जसमा २०७४ को स्थानीय चुनावमा जुन पार्टीले जितेको छ त्यसैलाई दिने र अर्को एमाले र स्वतन्त्रबाट जितेका स्थानमा भागबन्डा गर्ने सहमति भएको थियो। ७४ मा कांग्रेसले जितेको ३, समाजवादीले जितेको १ तिनै दलले पाउने भनिएको थियो।
गठबन्धन दलका एक नेताका अनुसार नेपालगन्ज, बुटवल, इटहरी, हेटौंडा, सिमरा, तुल्सीपुर र घोराहीलाई बाँडफाँट गरिने गरी छलफल भएको छ। उपमहानगरमा गठबन्धन दलबीच, घोराही, सिमरा र इटहरीमा सहमति जुट्न सकस भएको छ। घोराहीमा माओवादी र कांग्रेसको दाबी छ। सिमरामा जनता समाजवादी र कांगे्रस बीचमा तालमेल मिलेको छैन। इटहरीमा भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनको छलफलका बारेमा जानकारी दिँदै भने ‘शीर्ष नेताबीच सहमति जुट्दै छ। निष्कर्षमा पुग्न केही समय लाग्छ। आजै राति पनि हामी छलफलमा हुन्छौं।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट